क्यानरी टापुको बारेमा सबै - के गर्ने र क्यानडाई द्वीपमा हेर्नुहोस् Absolut यात्रा
क्यानरी टापुहरू एउटा द्वीपसमूह हो जुन अटलान्टिक महासागरमा अवस्थित छ र यसले स्पेनको स्वायत्त समुदाय बनाउँछ। एकातिर, मुख्य भ्रमणहरू मध्ये एक टेनेरिफको भ्रमण गर्नु हो। दुबै तीदे नेशनल पार्क र सान्ता क्रुज दुई महत्त्वपूर्ण स्थानहरू हुन्। गेमर वा ला ओरोटाभाको पिरामिडहरू बिर्सन नगरी साथै एल माडानो जुन अर्को पर्यटक पोइन्ट हाइलाइट हुन्छ।
ग्रान क्यानारियामा तपाईं मस्पालोमामा जान सक्नुहुन्छ जुन एक ठूलो पर्यटन केन्द्र हो, साथै यसको टिब्बा। दृश्यहरु र संग्रहालयहरु तपाईको चासोको साथसाथै प्राकृतिक पार्कहरू पनि हुनेछन्। यदि हामीले लन्जारोटमा रोक्छौं भने हामी यसको भ्याल्कनोको प्राकृतिक पार्क, साथै टिमानफया पार्कको आनन्द लिनेछौं। ला ग्रासिओसा टापुले तपाईंलाई अनौंठो समुद्री किनारहरूको आनन्द लिन दिनेछ। Jameos del Agua नबिर्सनुहोस्, जुन एक धेरै महत्त्वपूर्ण गुफा प्रणाली हो।
फुर्तेभेन्टुरामा तपाईंसँग कोरेलेजो शहर छ र साथमा इस्ला डे लोबोस वा कोफेट समुद्र तट छ, जबकि ला पाल्मामा तपाईं सान्ता क्रुज, क्यान्काजोस समुद्री तट वा स्यान एन्टोनियो भोल्टोनोबाट हिंड्न सक्नुहुन्छ। ला गोमेरामा तपाईं वाल्लेहेर्मोसो याद गर्न सक्नुहुन्न, जुन यसको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो, वा टोरे डेल कोन्डे र यसका तटहरू।
यसको राजधानी भल्भर्डे र मिराडोर डे ला पेनिया वा ला फ्रोंटेरा नगरपालिकाको साथ एल हाइरोमा समाप्त गर्न, जुन तपाईं क्यानरी टापुहरूको यस क्षेत्रमा पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा हो।
क्यानरी टापुहरूमा के हेर्ने
द्वारा लुइस मार्टिनो बनाउँछ 10 महिना .
क्यानरी टापुहरूमा के हेर्ने? यो लाखौं पर्यटकहरु बीच एक धेरै बारम्बार प्रश्न हो जुन हरेक वर्ष आउँदछ ...
कुएवा डे लस भर्डेस
हामी Cueva de los Verdes लाई पृथ्वीको केन्द्रको प्रवेशद्वारको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं। किनकि यसको बारेमा हो ...
Timanfaya राष्ट्रीय पार्क
द्वारा लुइस मार्टिनो बनाउँछ 1 वर्ष .
ल्यानजारोटको क्यानरी टापुमा अवस्थित तिमान्फया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात हुनको लागि हाम्रो देशमा अनौंठो छ।
जब हामी रोक् नुब्लोको उल्लेख गर्छौं, हामीले ग्रान क्यानरिया पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ किनकि यो सब भन्दा मौलिक स्थानहरू मध्ये एक हो र ...
गन्तव्यहरू जहाँ एक आश्चर्यजनक क्रिसमस बस्न
द्वारा अल्बर्टो पैर बनाउँछ2वर्ष .
जब जाडो आउँछ, चिसो आउँदछ, भुनेको चेस्टनट र हो, क्रिसमस पनि। सब भन्दा प्रसिद्ध पार्टी ...
Fuerteventura मा भ्रमण गर्न6आवश्यक स्थानहरू
द्वारा Absolut यात्रा बनाउँछ2वर्ष .
गर्मी समाप्त हुँदैछ र शरद beginsतु सुरु हुन्छ, वर्षको समय घण्टा घटाई द्वारा विशेषता ...
इस्ला डे लोबोस: क्यानरी टापुहरूमा यो सानो स्वर्गमा के हेर्ने
लान्जारोटे र फुएर्टेभेन्चुराको बीचमा, एउटा टापु उदासीन क्षेत्रको आशामा उठेको छ जुन हामी हेर्दै आएका छौं ...
एक हप्ताको अन्तरालमा गन्तव्यहरू
यात्राले जहिले पनि कुनै दिनचर्यालाई अक्सीजन गर्न सहयोग गर्दछ। विच्छेदन गर्न र नयाँ ठाउँहरू पत्ता लगाउन को लागी सहज को लागी धन्यवाद ...
द्वारा अल्बर्टो पैर बनाउँछ3वर्ष .
क्यानरी टापुहरूले विकल्प र आकर्षणहरूको कम्बल प्रदर्शन गर्दछ जुन टेनेरिफमा उत्तम केन्द्रबिन्दुमा पाइन्छ जुन ...
स्पेनमा सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू
स्पेन विरोधाभासहरूको देश हो: क्यानरी टापुको उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रदेखि पिकोस डी यूरोपाको हिउँ चुचुरोसम्म ...
Caldera डे Taburiente
द्वारा सुसाना Godoy बनाउँछ4वर्ष .
Caldera de Taburiente क्यानरी टापुहरूमा अवस्थित छ, ला पाल्मा टापुमा। यो संरक्षित पार्क हो ...